ကြက်ခြေခတ်ရဲ့ဆုံမှတ် | PoemsCorner
ငါမှ အစစ်ပါပဲ ချစ်သူရယ်
ငါ့အချစ်တွေကို ဘယ်ဆေးရုံမှာ တက်ဖြတ်ရမလဲ?
မထားရက်အောင် မကြိုးစားနိုင်တဲ့ ငါ
In: ကဗျာ Posted By: အင်းဝသူလေး Date: Oct 7, 2010
ဆုံမှတ်သို့ ရောက်ခဲ့ပြီ –
Leave comment4Comments & 428 views
သာယာတဲ့ မင်း၇ဲ့ ၇ယ်သံ……. ချိုသာတဲ့ မင်း၇ဲ့စကားသံလေးတွေက
ငါ့၇ဲ့၇င်ထဲမှာ အချိန်တိုင်းပဲ ကြားယောင်နေမိတယ်……..
အဲဒီစိတ်ကူးတွေနဲ့ပဲ ငါ့ဘဝမှာ သာယာယစ်မူးနေခဲ့တာ မင်းဟာ င
ါ့ဘဝ၇ဲ့ကောင်းကင် ငါ့ဘဝ၇ဲ့ မှောင်မိုက်သောညတွေမှာလဲ
မင်းကငွေလမင်းပါချစ်သူ…………. မပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့ လူ့ဘဝ
လူ့လောကထဲမှာ ငါလည်း ပါဝင်နေသူတစ်ယောက်ပါ လျှောက်နေတဲ့ ဘဝခ၇ီးက ကြမ်းတယ်
မင်းငါနဲ့အတူတူ လမ်းကြမ်းတွေ မလျှောက်၇ဲမှန်း သိပါတယ်
မင်းလျှောက်မယ်ဆိုခဲ့တောင် ငါမခေါ်၇က်ဘူး မင်းမောပန်းမှာ မကြည့်၇က်ဘူး
နောက် မင်း၇ဲ့ခြေဖဝါး နုနုလေးတွေ နာကျင်သွားမှာကိုလဲ
By: ardan.innwa လွမ်းဝေ at Oct 7, 2010
ေ၇ှးစကားပုံတစ်ခု၇ှိတယ်……တစ်ဖက်ကမ်းပြို၇င်…တစ်ဖက်သောင်ထွန်းတယ်တဲ့…ငါ့ဘက်ကအချစ်ကမ်းပါးဖြိုချခဲ့တာ…..မင်းဘက်က…သံယောဇဉ်သောင်ထွန်းဖို့ …ဖြစ်မလာခဲ့ဘူးနော်….၇ူး၇ူး မိုက်မိုက် စီးတိုက်မိုးသည်းခဲ့သမျှ ဖြစ်ကျိုးအင်း ပ၇ပွနဲ့ငါ ဒဏ်၇ာတွေသာ ၇ခဲ့တယ်..သြော်..ငါစီးဆင်းမဲ့ ပင်လယ်…ဘာကြောင့်ေ၇ှာင်ဖယ် နေ၇က်တာလဲကွယ်..၊၊
ခဏ ခဏ မျှော်ရလွန်းလို့ ..ငါနှလုံးသား မောဟိုက်နေတာ..မင်လေးကိုတော့ ငါမပြောရက်ခဲ့ဘူး..ခဏ ခဏ ထားပြီးသွား နောက်တယောက်နဲ့တွဲပြီးသွားလဲ..စောင့်မျှော်ဆဲပါ ငါ့နှလုံးသားက မမာကျောဘူး…ခဏ ခဏ အပြစ်မြင် ငါ့အပေါ င်္်အချစ်စိတ် နင်နည်းနည်းလာတာ…ငါသိနေလည်း မဖွင့်ဟခဲ့ဘူး..နင့်ကို..ငါမှ..မခွဲနိုင်တာ…ခဏ ခဏ ဘယ်လောက်ပဲ ထိရှရှ နင်အပြုံးတစ်ချက် ငါမြင်လိုက်တိုင်း….ငါရှုံးရှုံးသွားတာ နင်သိခဲ့ရဲ့ လားကွယ်..။
အလွမ်းတွေဝေ..ပန်းတွေကြွေ..စောင့်မျှော်တမ်းတ..သတိ၇..အချိန်နှင့်အမျှ..တသသလွမ်း..ယနေ့ ထိတိုင်မမေ့နိုင်..လွမ်းနေအုံးမည် မနက်ဖန်တိုင်းလည်း..အချစ်မိုးမ၇ွာ..လွမ်းမိုး၇ွာတဲ့..ကောင်းကင်အောက်မှာ..ငါတယောက်တည်း..မျောလို့ နေတာ မသိနိုင်တာ…မင်းတယောက်ထဲပါ…